iPod | R Blog..!
Archive for the ‘iPod’ Category	iPod Touch 3.1.2 Firmware jailbreak guide [Burmese]
Apple ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် iPhone OS 3.1.2 ကုို Jailbreak လုပ်တဲ့နည်းကို ရေးပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင် 3.0 မှာတုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ Dev Team ရဲ့ redsn0w ကုို သုံးမှာ မဟုတ်ပဲ GeoHot ရဲ့ blackra1n (Black Rain) ကုို သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ GeoHot ရဲ့ blackra1n က iPhone/iPod Touch family အားလုံးကုို မိနစ်ဝက် အတွင်း jailbreak လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သဘောကျစရာ တစ်ခုက iPhone/iPod ကုို DFU mode သွင်းစရာ မလုိုပါဘူး။ iTunes ကနေ အရင်ဆုံး 3.1.2 ဖြစ်အောင် update လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် blackra1n ကုို ဖွင့်ပြီး တစ်ခုတည်းသော ခလုပ်ဖြစ်တဲ့ Make it rain ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ Cydia တို့ Icy တို့ကုို jailbreak လုပ်ပြီးရင် iPod ထဲမှာ blackra1n ဆိုတာ တွေ့ပါမယ်။ အဲဒါကုို ဖွင့်ပြီး Cydia ကုို ရွေးလိုက်ပါ။
Blackra1n က Windows အတွက်ရော Mac အတွက်ပါ ရှိပါတယ်။
Blackra1n ကုို ရေးတဲ့ Geohot ဆိုတာက Apple ရဲ့ ပထမဆုံးသော iPhone 2G ကုို ပထမဆုံး hardware unlock လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ တကယ့် ဆရာပါ။
Warning to iPhone Users: iPhone ယူဇာတွေအတွက်ကတော့ Dev Team ရဲ့ Pwnage tool ကုိုပဲသုံးပါလုို့ သတိပေးချင်ပါတယ်။ iTunes ကနေ တိုက်ရိုက် firmware ကုို update လုပ်ရင် baseband ပါ update ဖြစ်သွားပြီး yellowsn0w သုံးလို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Unlock လုပ်စရာ မလိုတဲ့ ဖုန်းတွေကတော့ ပူစရာ မရှိပါဘူး။
Author: Rapster88	Categories: Hack, Tips Tricks and Tweaks, iPod	Tags: Remove Ads from Cydia
Author: Rapster88	Categories: Tips Tricks and Tweaks, iPod	Tags: iPod Touch Jailbreaking ULTIMATE Guide [In Burmese]
မင်္ဂလာပါ iPod ပိတ်သတ်ကြီးရေ..
ကျွန်တော် iPod Touch အတွက် Firmware 3.0 အလကားယူနည်း၊ redsn0w နဲ့ Jailbreak လုပ်နည်းနဲ့ Crack App တွေ install လုပ်နည်း စတဲ့ iPod user တွေ သိသင့်တဲ့ အချက်တွေကို အသေးစိတ် ရေးထားပါတယ်။
ps. iPhone user တွေအတွက်လဲ တစ်ချို့အပိုင်းတွေက အထောက်အကူ ဖြစ်မှာပါ။ =)
Author: Rapster88	Categories: Hack, Tips Tricks and Tweaks, iPod	Tags: Crack, iPod Touch	How to install Zawgyi on JailBroken iPod/iPhones
The credit goes to original author
This guide only applies to Jailbroken iPod Touch & iPhones.
အခုရေးမယ့် Guide က Jailbroken လုပ်ထားတဲ့ iPod Touch နဲ့ iPhones တွေပေါ်မှာ Zawgyi Font ကို install လုပ်တဲ့ နည်းဖြစ်ပါတယ်။ Zawgyi font နဲ့ ရေးထားတဲ့ webpages တွေကို ဖတ်လို့ရအောင်ပါ။ အခု guide က Windows ပေါ်မှာ လုပ်နည်းကိုပဲ ရေးသွားပါမယ်။ iPod/iPhone ကတော့ ဘယ် generation မဆို JB ဖြစ်ရင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
Author: Rapster88	Categories: Hack, Tips Tricks and Tweaks, iPod	Tags: iPod Touch, Zawgyi	My new iPod Touch + A little review
Author: Rapster88	Categories: Reviews, iPod	Tags: iPod Touch	Zawgyi Installed On iPod Touch 2G
iPod Touch 2nd Generation အတွက် Jail Break (Tethered) ထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲ ကျွန်တော့် iPod ကို JB(Jail Break) လုပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ JB လုပ်ချင်တဲ့ အကြောင်းကတော့ Spring Board လို့ခေါ်တဲ့ Menu ပေါ်က Application icon တွေကို Category ခွဲချင်တာနဲ့ နောက်ပြီး Safari မှာ ဇော်ဂျီ ဖောင့် နဲ့ စာဖတ်လို့ရအောင် လုပ်ချင်တာပါ။ RedSn0w က Tethred ဖြစ်လို့ iPod ကို reboot လုပ်တိုင်း JB ပြန်လုပ်ပေးနေရပါတယ်။
ဒီ Guide ကို ဖတ်ပြီးတော့ လိုက်လုပ်လိုက်တာ အခု အောက်မှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ site တွေကို ဖတ်လို့ရပါပြီ။
Author: Rapster88	Categories: News, iPod	Tags: iPod Touch, Zawgyi	RSS feed
Posting tweet...Powered by Twitter ToolsSponsors	Spam Blocked	17,672 spam comments blocked byAkismet